October 22, 2020 - Online Hartha
ရစရာရှိသော ပိုကျဆံအကွှေးမြား အမွနျဆုံး ပွနျရစရေနျ အစီမံ ယတွာ…
October 22, 2020 by Online Hartha
ပိုက်ဆံအကြွေးများအမြန်ဆုံး ပြန်ရစေရန် ယတြာ… ငွေချေးယူသွားပြီး ပြန်တောင်းရခက်နေပြီး နေ့ရွှေ့ညရွှေ့ လုပ်နေကြခြင်း၊ငွေမဆပ်တဲ့ အပြင် အဆက်အသွယ်ဖြတ်သွားသူများတို့ ကြောင့် မိမိပိုက်ဆံ/မိမိကတာဝန်ယူပြီး ချေးယူပြီး ကူညီပေးထားသော ငွေကြေး များပြန်ရစေရန်အတွက်အောက်ပါယတြာ စီမံနည်းစနစ် အတိုင်း လုပ်ဆောင်ရမည်။ အလျား(၅)လက်မ နှင့် အနံ(၁)လက်မခန့် ရှိသော ငှက်ပျောရွက် တစ်ရွက်ပေါ်တွင် ဆော့ပင်(သို့မဟုတ်)ဘောပင် အပြာဖြင့် စာရေးရပါတယ်။ ဥပမာ ဦး———/ဒေါ်———ငါ့ကိုပေးစရာ ရှိသောပိုက်ဆံအကြွေး(——)သိန်း အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်ပြီးပြန်လာဆပ်စေ။ အထက်ပါအတိုင်း စာကိုအရှည်လိုက်ရေးပါ ငှက်ပျောရွက်ပေါက်ပြဲခြင်းလုံးဝမဖြစ်ရပါဘူး နို့ဆီဘူးအသစ် ဘေးမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ထိုငှက်ပျောရွက်ကို(ရေးထားသောစာများအပြင်ဘက်တွင်ထား) ပါတ်ပြီး အပ်ချည်ကြိုး နှင့်(၉)ပတ်ချည်ရမည်။ ရေထည့်ထားသော စတီးဇလုံထဲတွင် စီရင်ထားသောနို့ဆီဘူးကို ထားလိုက်ပြီးနို့ဆီဘူးပေါ်တွင့် နေ့စဉ် ဖယောင်းတိုင်အသေး(၁)တိုင်စီ(၉)ရက်တိတိ ထွန်းရပါမယ်။ ဤယတြာကိုအိမ်ဘုရားကျောင်းဆောင် အောက် အနှိမ့်တစ်နေရာ ခုံတစ်လုံးပေါ်တွင် တိကျစွာလုပ်ဆောင်ရပါမည်။ ယခုဆရာဒါနပြုတင်ပြပေးသောယတြာ သည် … Read more
သင်တို့ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ရုပ်ပုံ တွေကပြောပြမယ့် သင်တို့စုံတွဲရဲ့အချစ်ရေးအကြောင်း
ရုပ်ပုံ တွေကပြောပြမယ့် သင်တို့စုံတွဲ ရဲ့အချစ်ရေး သင်တို့ရဲ့ပျော်ရွင်စရာကောင်းတဲ့ အချစ်ရေး ကို ရုပ်ပုံ တွေကဆင့်ပြောပြတာဟာ နည်းနည်းတော့ထူးဆန်းသလိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ ရုပ်ပုံ တွေဟာ လူမှု စိတ်ပညာရှင် တွေရဲ့ ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်တာကြောင့် သင်တို့စုံတွဲ နဲ့ ဆင်တူတဲ့ ရုပ်ပုံ ကို လက်နဲ့ထိပြီး သင်တို့ရဲ့အချစ်ရေး အခြေအနေကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ( 1 )သင်တို့စုံတွဲ လိုပါပဲ… အမျိုးသမီး လေးဟာ သူမရဲ့ချစ်သူ အတွက် ဂုဏ်ယူနေပြီးတော့ အဲဒီ့အကြောင်းကို တစ်ကမ္ဘာလုံးသိအောင် ပြောပြချင်နေပါတယ်။ သူမ ကအရမ်းကို လွတ်လပ် ပျော်ရွင်နေပြီးတော့ ပတ်ဝန်းကျင် ကဘယ်လိုပဲထင်ထင် သူမကဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူမရွေးချယ်ထားတဲ့ ချစ်သူ က သူမအတွက်အကောင်းဆုံးလို့ ထင်နေပြီးတော့ သင်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေး က နှစ်ယောက်စလုံး အရမ်းကို ပွင့်လင်း … Read more
ကိုယ်နဲ့ တစ်ညစာပျော်ဖို့ ခေါ်လာတဲ့ အပျော်မယ်လေးကို သူတောင်းစားကိုပေးပြီး ပျော်ခိုင်းလိုက်သောအခါ… ဘားတခုထဲကနေ အရက်တွေ အရမ်းကိုမူးနေတဲ့ လူတစ်ယောက် အရက်တစ်လုံး နဲ့ ညည့်ဌက်ကလေးတစ်ယောက် ဆွဲပြီး ထွက်လာသတဲ့…. အဲ့ဒီမှာပဲ ဘားအရှေ့မှာ တောင်းရမ်း စားသောက်နေတဲ့ သူတောင်းစား တစ်ယောက်က ဗိုက်အရမ်းဆာနေတဲ့အတွက်ကြောင့် … သူ့ကို အစားစားဖို့ ငွေစကြေးစ အနည်းငယ်လောက် စွန့်ကြဲဖို့ အမူးသမားကို တောင်းရမ်းပါတော့သတဲ့…. အဲ့ဒီမှာပဲ အမူးသမားကလည်း ငါ့မှာ ပိုက်ဆံတော့ မကျန်တော့ဘူး… မင်း သောက်ချင်ရင်တော့ ရော့..ငါ့ အရက် သာ သောက်လိုက်တော့လို့ အရက်ပုလင်း လှမ်းပေးရော… အဲ့ဒီမယ် သူတောင်းစားက (ကျွန်တော် အရက် မသောက်တတ်ပါဘူးခင်ဗျ ..ထမင်းစားဖို့ ငွေသာလိုတာပါ) လို့ ပြန်ပြောသတဲ့….. ဟာ….အဲ့ဒါဆိုလည်း ရော့ကွာ..ငါ့ ဆေးလိပ်ဗူး. … Read more
သငျ့ကို ဆယျနှဈစာ မက အရှယျတငျ နုပြိုစမေယျ့ အစား အစာ(၆)မြိုး
‘သင့်ကို ဆယ်နှစ် စာမ က အရွယ် တင်နုပျိုေ စမယ့် အစား အစာများ’ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ တစ်နေ့တာအတွက် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ အစားအစာမျိုးစုံကို မိမိအကြိုက်အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး စားသုံးနေကြတဲ့အထဲမှာ မိမိအတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ ကိုက်ညီမျှတတဲ့ အ စား အစာတွေ အများကြီးပါ ဝင်နေကြပါလိမ့်မယ်။ အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ သင့်ကို ဆယ်နှစ်စာမက အရွယ်တင်နုပျိုစေမယ့် အစားအစာ ၆ မျိုးကို ApannPyay ပရိသတ်ကြီးအတွက် ကျန်း မာရေး ဗဟုသုတအနေဖြင့် တင်ဆက် မျှဝေပေးလိုက်ပါရစေနော်။ ၁။ ထောပတ်သီး ထောပ တ်သီးမှာ လူအတွက် အကျိုးရှိတဲ့ အဆီဓာတ်တွေ ပါဝင်နေတာကြောင့် တစ်နေ့တစ်လုံးစားပေးခြင်းဟာ ကိုလက်စထရောကိုကျစေပြီး ကျန်းမာတဲ့ အသားအရည်အလှကိုရရှိစေမှာပါ။ ထော ပတ် သီးဖျော်ရည်ကြိုက်တတ်ရင်တော့ သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ၂။ … Read more
တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း (22.10.2020 မှ 28.10.2020 အထိ)
22.10.2020 မှ 28.10.2020 အထိ တစ်ပတ်စာ (၇)ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ ယခုကာလအတွင်း သင်သည် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများဖြင့် အကျိုး ပေးမည်။ မိတ်ကောင်း၊ ဆွေကောင်း တိုးပွားခြင်းများရှိမည်။ လုပ်ငန်းကြီးများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းကောင်း များ ပေါ်ထွက်လာမည်။ အိမ်နီးနားချင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ စကားများရခြင်း၊ အမှုအခင်းဖြစ်ရခြင်း၊ စိတ်ညစ်ရခြင်း များရှိမည်။ အတတ်နိုင်ဆုံး မိမိစိတ်ကို အေးအေးဆေးဆေး ထားပါ။ စိတ်မြန်မှု၊ ဒေါသကြီးမှုများကြောင့် အမှားများ ကြုံတွေ့ရတတ်ပြီး ကျန်းမာရေးကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်ပါက ဌာနအတွင်း အဆင်ပြေမည်။ ဝင်ငွေလည်း အထူးကောင်းလိမ့်မည်။ထို့အပြင် အင်္ဂါသားသမီး တစ်ဦးဦးထံတွင် ငွေကြေးရင်းနှီးမြှပ်နှံထားခြင်း၊ အပ်နှံထားခြင်းများ ရှိပါကလည်း ဆုံးရှုံးတတ်သည်ကို အထူးသတိပြုရသင့်ပါသည်။ မိမိအတွက် အရေးကြီးကိစ္စ … Read more
တစ်နေ့ကို ရှစ်နာရီထက် ပိုအိပ်ရင် ကြုံတွေ့ရမယ့် ကျန်းမာရေးပြဿနာ (၆) ခု
ရှစ်နာရီထက် ပိုအိပ်ရင် ကြုံတွေ့ရမယ့် ကျန်းမာရေးပြဿနာ (6) ခု ကျန်းမာရေးအတွက် တနေ့ကို ရှစ်နာရီအောက် နည်းပြီး မအိပ်သင့်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူအများစုက အိပ်ချိန်ရှစ်နာရီထက် ပိုများရင်လည်း ကောင်းတယ်လို့ ထင်နေကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အိပ်ချိန်ရှစ်နာရီထက် ပိုခြင်းက အိပ်ချိန် ရှစ်နာရီအောက် လျော့ခြင်း လိုပဲ ကျန်းမာရေးကို အန္တရာယ် ပေးပါတယ်။ 1. ကိုယ်အလေးချိန် တိုးလာခြင်း အိပ်ချိန် နည်းပါးခြင်းရော အိပ်ချိန်များခြင်းကပါ အဝလွန်ခြင်း၊ ဆီးချိုရောဂါတို့နဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အိပ်ချိန်များရင်လည်း ဝလာတတ်ပါတယ်။ အိပ်ချိန်များတဲ့ အခါ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့လည်း အချိန်မရတော့ပါဘူး ။ 2. စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း အိပ်ချိန်မမှန်တဲ့သူတွေက စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းကို ခံစားရတတ် ပါတယ်။ အချိန်အကြာကြီး အိပ်တဲ့သူတွေက စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းလျခြင်းကို … Read more
တိုက်ဆိုင်လို့ မခံနိုင်ရင်လဲ ဘလော့သွားကြပါ ၊သိက္ခာ အကြောက်တရား မရှိရင် ဆက်လုပ်ချင်ရာ လုပ်ကြပါ…
တိုက်ဆိုင်လို့ မခံနိုင်ရင် ဘလော့သွားကြပါ ၊သိက္ခာ အကြောက်တရား မရှိရင်ဆက်လုပ်ချင်ရာ လုပ်ကြပါ… မယားရှိ ယောက်င်္ကျားတွေ၊ လင်ရှိတဲ့ မယားတွေအသေချာ ဖတ်ကြည့်သွားကြပါ …။လင်ရှိတဲ့ မယားတွေမယားရှိတဲ့ ဖွန်ရူးတွေ သေချာဖတ်ပါ။ ဒူးနဲ့မျက်ရည်သုတ်ရတဲ့ ဘဝမရောက်ခင် ပြင်သင့်တာကိုပြင်ပါ …။သိက္ခာ အကြောက်တရား မရှိရင်ဆက်လုပ်ချင်ရာ လုပ်ကြပါ။ သူတော်စဉ်ယောင်ယောင် လူကြီးလူကောင်းယောင်ယောင်နဲ့ ကြောင်သူတော် ကြွက်သခိုးမလုပ်ကြပါနဲ့ …။ Online သုံးပြီး အရွံဆုံးက လင်ရှာမယားရှာ လင်ရူးဖွန်ရူး တွေပဲ။ အိမ်ကညီမ အမနဲ့ဇနီမယားကို လူများတွေကြည့်မှာကို ကြောက်တဲ့လူ သဝန်တိုတတ်တဲ့လူ သူများသားမယားကိုကြတော့ ဘာလို့အချောင်နှိက်ချင်နေကြတာလဲ …? တိုက်ဆိုင်လို့ စိတ်ဆိုးရင် တစ်ခါတည်း Block သွားပါ အမှန်တရားက အမှန်တရားပါပဲ …။“အိမ်ထောင်ရှင်နှင့် On Line ” အန္တရာယ်ခေတ် ကာလ … Read more
ငှကွေေးအခကျအခဲ အဆငျပွလေိုလြှငျ သောကွာနကြေ့ ဒါလေးလုပျပါ…
ငွေကြေးအခက်အခဲ အဆင်ပြေလိုလျှင် သောကြာနေ့ကျ ဒါလေးလုပ်ပါ… သောကြာနေ့တိုင်းအဖြူရောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုလှူပါ။ ငွေကြေးအခက်အခဲ အဆင်မပြေမှု သောကများမှ လွတ်ကင်းချမ်းသာစေဖို့ ဆရာဦးမင်းနိုင် ကျွန်တော့်ကိုသင်ကြားပြသခဲ့သည်ထဲမှတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ငွေလိုရင်ငွေရစေသည့်နည်းလမ်းလေးတစ်ရပ်ကို တိုက်ဆိုင်မှုလေးတွေနဲ့ သတိရလို့ အများသူငှါ အကျိုးရှိစေရန် ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်…ဒါနပြုပါရစေခင်ဗျ….။ အဖြူရောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုလှူရမည်ဆိုရာ၌ ဆန်တစ်ထုပ်တွင်ထန်းလျက်(သို့)ကြံသကာနှင့် မိမိတက်စွမ်းနိုင်မည့်ပိုက်ဆံ တို့ကို တွဲဖက်၍ သောကြာနေ့တိုင်း၌ မရှိဆင်းရဲသားများကို ဒါနပြု လှုဒါန်းပေးရပါမည်။ ၁။ပထမအဆင့်၌ စားဝတ်နေရေးပြေလည်နေခြင်း။ ၂။ဒုတိယအဆင့်၌ ငွေကြေးလည်ပတ်မှူကောင်းမွန်နေခြင်း။ ၃။တတိယအဆင့်၌ ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းကို မုချရရှိမည်။ မရှိဆင်းရဲသားများကို နေ့လည်(၁၂)နာရီမှ ညနေနေဝင်ချိန်အတွင်း လုံးဝမလှူရပါ။ ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးတကယ်လုပ်အဟုတ်ထိရောက်လွန်း လို့ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်သောကြာနေ့ရက်တိုင်း သတိတရ လုပ်ဖြစ်နေတဲ့နည်းလေးပါ။ ယုံကြည် အားကိုး ဆန္ဒရှိသူများအတွက် ဗေဒင်နှင့်အထူးယတြာပေးပညာရှင် ဆရာပေါက်ကျိုင်း 09776478912 Unicode Version ငှကွေေးအခကျအခဲ အဆငျပွလေိုလြှငျ သောကွာနကြေ့ ဒါလေးလုပျပါ… သောကွာနတေို့ငျးအဖွူရောငျပစ်စညျးတဈခုခုလှူပါ။ … Read more
လူငယ်စုံတွဲ ဟိုတယ် အခန်းထဲက တစ်ပတ်လုံး အပြင်မထွက်လို့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့
လူငယ်စုံတွဲ ဟိုတယ် အခန်းထဲက တစ်ပတ်လုံး အပြင်မထွက်လို့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ… အဆင့်မြင့် ဟိုတယ်တစ်လုံး မှာ စုံတွဲတစ်တွဲ အခန်းငှားတည်းခိုခဲ့ပြီး ၇ ရက် တစ်ပတ်လုံးလုံး အခန်းထဲက ထွက်လာတာမတွေ့ရတဲ့အတွက် ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းများနဲ့ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ကပါ မသင်္ကာဖြစ်လာပြီး အခန်းကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ၊အားလုံး အံ့အားသင့် ဒေါသထွက်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် ကိုယ်တိုင် ပစ္စည်း ပို့သမားယောင်ဆောင်ကာ အခန်းတံခါးကို သွားခေါက်ခဲ့ပါတယ်။ အခန်းတံခါး ဟရုံလေးဖွင့်လာပါတယ်။ တံခါးဟနေတဲ့ ကြားကနေ အခန်းထဲကို လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ထိတ်လန့်အံ့အားသင့်စရာ မြင်ကွင်းကို မြင်လိုက်ရပါတယ်။ ဟိုတယ်အခန်း နေရာအနှံ့မှာ စားကြွင်း စားကျန်များ အမှိုက်များ ပြန့်ကျဲပြီး စည်းကမ်းမဲ့ ပစ်ထားတာကြောင့် အနံ့တွေက မကောင်းတော့သလို အခန်းထဲက အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းအချို့လည်း ဖျက်ဆီးခံထားရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်က ချက်ခြင်း ရဲစခန်းကို … Read more
အရမ်းဝလာလို့ စိတ်မညစ်ပါနဲ့ အိမ်မှာပဲ လုပ်လို့ရတဲ့ ဆေးနည်းလေး ဒါနပြုပါရစေ…
ရှောက်ရွက် ၇ ရွက်၊ ကွမ်းရွက် ၃ ရွက် ၊သကြား ၂ဇွန်း၊ ဆား ၁ဇွန်းလျော့လျော့ (ထမင်းစားဇွန်းနဲ့) ရေအပြည့်ဖြည့်ပြီး ၁၀ ရက်ထား ၊ ပြီးရင် အရွက်တွေ ဖယ်ထားပြီး အစာမစားခင်အကြမ်းပန်းကန်တစ်ခွက် သောက်ပေးယုံဘဲ(အခန်းအပူချိန်ထဲဘဲထားရန်)အရွက်တွေမဖယ်ထားလဲဘာမှမဖြစ်ပါ ရာသီဥတုအရမ်းပူနေတော့ အရမ်း ချဉ် စူး သွားမှာစိုးလို့၊ကိုယ်သောက်နိုင်ရင်ရပါတယ်… ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ထားရင်တော့ အချဉ်ဓါတ်က ထပ်မထွက်တော့ဘဲ ပိုသောက်ကောင်းပါတယ် 2005 /2006 ခုနှစ်လောက် မေမေ အရမ်းဝနေတုန်းက (ဆိုက္ကား ပေါ် ထိုင် တာတောင် မဆန့်ဘူး) ခြေထောက်ကလည်း ဘယ်ပြန် ညာပြန်ကျိုးထားတော့ ဖေဖေ့ညီမ တစ်ယောက်ကနေ ဒီနည်းလေးပေးခဲ့တာ၊(အဲ့အချိန်တုန်းက ကို ယ်တွေက မလိုအပ်ဘူး ဂျပိန်လေး ၊ လေတိုက်နေလို့ လိုက်ကာလွင့်တာနဲ့ ကုလားထိုင်လေးနဲ့ လိုက်ကာကိုဖိထိုင်တာ ကိုယ်ပါ … Read more